Steamed Bun Mgwakota agwa (achicha) | Njem zuru oke
Steamed Bun Mgwakota (achịcha)
Ndị a bụ chinese bun uzommeputa Yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ememme Cheung Chau Bun, ọbụlagodi mgbe oge ochie gafere, ma nụ ụtọ ha n'afọ niile.
Nke a bụ nke nkiti uzommeputa maka nkwadebe nke steamed achịcha mgwakota agwa eji na efere nke Char Siu Bao.
Maka muffins 24:
1 ngwugwu achicha achicha ma obu 1 achicha achicha achicha
1 iko mmiri luara keara
4 1/2 iko ntụ ọka
1/4 iko shuga
2 ngaji mmanụ mmanụ
1/2 iko esi mmiri
2 tablespoons sesame mmanụ
Igbari yist na mmiri ọkụ. Tinye 1 iko ntụ ọka. Gwakọta nke ọma. Kpuchie ya na akwa. Ka ebili maka 1 awa, ruo mgbe egosipụta apụta. Igbari shuga na mmanụ ihe oriri na 1/2 iko esi mmiri. Kpalie nke ọma. Zuo ike ruo mgbe keara mara. Wunye ngwakọta n'ime ngwakọta yist. Tinye iko iko 3 1/2. Igwakorita na mgwakota agwa na a gwuo egwu floured elu ruo mgbe ire ụtọ. Tinye na a nnukwu efere tee na-ekpo ọkụ. Kpuchie na keguru mmiri ákwà. Hapu ya ka o too rue ugboro abuo n’ime olu ya, odika Awa 2. Kewaa n'ime ugboro abụọ. Wepu akụkụ nke mbụ ma gwakọta nkeji abụọ. Tinyegharịa nke abụọ. Mee mpịakọta ma bee n'ime 12 iberibe (24 na mkpokọta). Mee ka mpempe akwụkwọ ọ bụla were ọbụ aka gị gbasaa. tinye mmanụ sesame ma pịgharịa na ọkara nke mere na ọ ga-abụ ọkara ọnwa. Pịa akụkụ ya nke ọma na ndụdụ. Ebe ọ bụla mpịakọta na iche iche square ibe aluminom foil na tree uzuoku kpuchie ya na akwa nhicha. Chere maka buns okpukpu abụọ na olu, ihe dika 30 nkeji. Wepu akwa nhicha ahụ.
Ije Ozi na ọbọgwụ ọbọgwụ, crispy ọbọgwụ, ma ọ bụ na ihe ọ bụla ndochi ị chọrọ. Nwere ike ịkwadebe tupu oge eruo. Enwere ike oyi kpọnwụrụ. Mee ka mmiri gbazee n’ime akpa rọba ma laghachikwa mmiri n’ime nkeji iri.
Ozi ndị ọzọ - Cheung Chau Bun Festival
Isi mmalite - Cheung chau
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Steamed Bun Mgwakota (achịcha)
Char Siu Bao (anụ ezi anụ ezi nke China)
Best Switzerland ndị siri nri